Bit By Bit - Ethics - 6.3 Digital waa ka duwan yahay
Cilmi Bulshada ee da'da digital leeyahay sifooyin kala duwan oo sidaas daraaddeed su'aalo anshaxa kala duwan.
Da'da analogga ah, cilmi-baarisyada bulsheed badankoodu waxay leeyihiin xaddidan xadidan oo ay ku shaqeeyaan xeerar macquul ah oo cad. Cilmi-baarista bulshada ee da'da dijitaalku way ka duwan tahay. Cilmi-baadhayaasha-inta badan ee la shaqeeya shirkadaha iyo dawladaha-waxay leeyihiin awood dheeraad ah ka qaybgalayaasha ka badan sidii hore, iyo xeerarka ku saabsan sida awoodda loo isticmaalo aan weli caddayn. Awoodda, waxaan ula jeedaa in si fudud loo awoodo in dadku wax u qabato iyaga oo aan ogolaansho ama xitaa wacyigelin. Noocyada waxyaabaha ay cilmi-baarayaashu ku sameyn karaan dadka waxaa ka mid ah in la ilaaliyo dabeecadooda oo ay ku qoraan tijaabooyinka. Iyada oo awoodda cilmi-baadhayaasha ah ee ilaalinaysa iyo xakamaynta ay sii kordhayso, ma jirin wax isbeddel ah oo loo siman yahay oo ku saabsan sida awooddaas loo isticmaali karo. Dhab ahaan, cilmi-baarayaashu waa inay go'aamiyaan sida loo isticmaalo awooda awoodooda iyada oo ku saleysan xeerarka aan sharciga waafaqsaneyn, sharciyada, iyo caadooyinka. Isku dhafan awoodaha awoodda leh iyo tilmaamaha aan caddayntu wuxuu abuuraa xaalado adag.
Mid ka mid ah awoodaha ay cilmi-baarayaashu hadda leeyihiin waa awooda lagu ilaaliyo dhaqanka dadka iyada oo aan la helin ogolaansho ama wacyigelin. Cilmi-baadhayaashu way dabiici karaan tan, laakiin da'da dijitaalka, miisaankuna wuu ka duwan yahay, xaqiiqda ayaa lagu soo bandhigay marar badan taageerayaal badan oo ilaha xogta waaweyn. Gaar ahaan, haddii aan ka guurno qiyaasta ardayga shakhsi ama professor ka sokow tixgelin miisaanka shirkad ama hay'ado dawladeed oo cilmi-baarayaashu ay sii kordhayaan iskaashiga- arimaha qiiro ee suurtogalka ah noqdaan kuwo adag. Mid ka mid ah tusaalayaasha aan u malaynayo inay dadka ka caawiso aragtida fikradda ilaalinta bini'aadamka waa panopticon . Asal ahaan waxaa soo jeediyay Jeremy Bentham oo ah qaab dhismeedka xabsiyada xabsiyada, panopticon waa dhismo wareeg ah oo leh unugyo lagu dhisay hareeraha dhexe (sawirka 6.3). Qofkasta oo heysta ilaaliyahan wuxuu ilaalin karaa dabeecada dadka oo dhan qolalka iyada oo aan la seexin. Qofka in munaaradda sidaas waa wax arke ah waxa maqan (Foucault 1995) . Doodaha khaaska ah ee gaarka ah, da 'da' da 'da' ayaa naga hor istaagay xabsiga panoptic halkaas oo shirkadaha tiknoolajiyada iyo dawladaha ay si joogta ah u daawadaan iyo dib u soo celiyaan anshaxeena.
Jaantuska 6.3: Naqshadaynta xabsiga panopticon, marka hore waxaa soo jeediyay Jeremy Bentham. Bartamaha, waxaa jira aragti aan la socon oo ilaalin kara dabeecada qofkasta laakiin looma ogaan karo. Sawirqaade: Willey Reveley, 1791 (Source: Wikimedia Commons ).
Si aad u qaadato tusaalahan, marka cilmi badan oo cilmi bulsheed ah ay ka fekeraan da 'da dijitaal, waxay isu sawiraan gudaha gudaha maktabadda, kormeerida habdhaqanka iyo abuurista xog ururin ah oo loo isticmaali karo dhammaan noocyada cilmi baaritaanka xiisaha iyo muhiimka ah. Laakiin hadda, halkii aad ku maleyn lahayd inaad isha ku haynaysid, iskuday inaad naftaada mid ka mid ah unugyada. Diiwaanka Master-ka ayaa bilaabanaya inuu u ekaado waxa Paul Ohm (2010) uu ugu yeeray database-ga burburka , kaas oo loo isticmaali karo siyaabo aan caddaalad ahayn.
Qaar ka mid ah akhristayaasha buuggani waa nasiib ku filan in ay ku noolaadaan wadamada ay ku kalsoon yihiin asxaabtooda maqan si ay u isticmaalaan xogtooda si masuuliyad leh iyo in ay ka ilaaliyaan cadaawadaha. Akhristayaasha kale maaha mid nasiib badan, waxaanan hubaa in dhibaatooyinka ay kor u qaadeen kormeerayaasha ay aad u cad yihiin. Laakiin waxaan aaminsanahay in xitaa kuwa akhristayaasha nasiib lihi weli wali walaac weyn laga hayo kormeer ballaaran: Isticmaalka labaad ee aan loo baahnayn . Taasi waa, xogta aasaasiga ah ee loogu talagalay hal ujeedka-sheegida bartilmaameedyada-hal maalin ayaa loo isticmaali karaa ujeeddo aad u kala duwan. Tusaalahan naxdinta leh ee isticmaalka labaad ee aan la rajeyneynin ayaa dhacay intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, markii xogta tirakoobka ee dawladda loo adeegsaday in lagu fududeeyo xasuuqii ka dhacay Yuhuudda, Roma, iyo kuwo kale (Seltzer and Anderson 2008) . Isticmaalayaasha xog ururiyay xilligii nabadgelyo ahaanba waxay kufsadeen rabitaan wanaagsan, muwaadiniin badanna waxay ku kalsoonaadeen inay si habboon u isticmaalaan xogta. Laakiin, marka adduunku isbeddelay-markii Naasigu awood u yimid - xogtaasi waxay awood u yeelatay isticmaalka labaad ee aan waligeed la filayn. Si fudud, mar haddii xogta macaamiisha ah ay jiraan, way adagtahay in la sugo qofka helaya helitaanka iyo sida loo isticmaalo. Xaqiiqdii, William Seltzer iyo Margo Anderson (2008) ayaa diiwaangeliyay 18 kiis oo ay ku jiraan nidaamyada xogta dadweynaha ama ay ku lug lahaayeen xadgudubyada xuquuqda aadanaha (Jaantus 6.1). Dheeraad ah, sida Seltzer iyo Anderson ay tilmaamayaan, liiskaan ayaa dhab ahaantii ah qadarin sababtoo ah xadgudubyada intooda badani waxay ku dhacaan qarsoodi.
Jadwalka 6.1: Kiisaska ay Nidaamka Nidaamyada Dadweynaha Lagu Qabtay ama Laga Helay Xadgudubyada Xuquuqda Aadanaha. Eeg Seltzer iyo Anderson (2008) si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kiis kasta iyo shuruudaha ka mid noqoshada. Qaar ka mid ah, laakiin dhammaantood, kiisaskaas ayaa ku lug leh isticmaalka aan la isticmaalin ee dugsiga sare.
Shakhsiyaadka ama kooxaha lala beegsado
Xad-gudubka xuquuqda aadanaha ama ujeedada dawlad-goboleed ee la doonayo
Australia 19aad iyo qarnigii 20aad Aborijinaalka Diiwaangelinta Dadweynaha Socdaalka khasabka ah, waxyaabaha xasaasiga ah
Shiinaha 1966-76 Nooca ugu sarreeya asalka dhaqanka Diiwaangelinta Dadweynaha Socdaalka khasabka ah, rabshadaha rabshadaha
Faransiiska 1940-44 Yuhuudda Diiwaangelinta Dadweynaha, tirakoobyada gaarka ah Hijrada qasabka ah, xasuuqa
Germany 1933-45 Yuhuudda, Roma, iyo kuwa kale Tirada badan Hijrada qasabka ah, xasuuqa
Hungary 1945-46 Jarmalka iyo kuwa ka hadlaya afka hooyo ee Jarmalka 1941 tirakoobka dadweynaha Socdaalka khasabka ah
Netherlands 1940-44 Yuhuudda iyo Roma Nidaamka diiwaangelinta dadka Hijrada qasabka ah, xasuuqa
Norwey 1845-1930 Samis iyo Kvens Tirakoobyada dadka Nadiifinta qowmiyadeed
Norwey 1942-44 Yuhuudda Tirakoobka gaarka ah iyo diiwaangelinta dadweynaha Xasilinta
Poland 1939-43 Yuhuudda Tirakoobyada ugu muhiimsan Xasilinta
Roomaaniya 1941-43 Yuhuudda iyo Roma 1941 tirakoobka dadweynaha Hijrada qasabka ah, xasuuqa
Rwanda 1994 Tutsi Diiwaangelinta Dadweynaha Xasilinta
Koonfur Afrika 1950-93 Afrika iyo "midabo" 1951 tirakoobka dadweynaha iyo diiwaangelinta dadweynaha Apartheid, cod-bixiyeha nacaybka
Mareykanka Qarnigii 19aad Native Americans Tirakoobyada gaarka ah, diiwaannada dadweynaha Socdaalka khasabka ah
Mareykanka 1917 Kuwa la tuhunsan yahay qabqablayaasha qabyada ah 1910 Tirakoobkii Baaritaan iyo dacwad ku oogid dadka ka fog diwaangelinta
Mareykanka 1941-45 Japanese Americans Tirakoobkii 1940 Socdaalka iyo ku-meel-gaarka ee khasabka ah
Mareykanka 2001-08 Argaggixisada la tuhunsan yahay Sahannada NCES iyo xogta maamulka Baaritaan iyo dacwad ku qaadid argagixiso gudaha iyo dibeddaba
Mareykanka 2003 Carabta Maraykanka Tirakoobkii 2000 Lama yaqaan
USSR 1919-39 Dadka tirada yar Tirakoobyada kala duwan ee dadweynaha Socdaalka khasabka ah, ciqaabta danbiyada culus ee kale
Cilmi-baareyaasha caadiga ah ee bulshadu waa mid aad iyo aad uga fog wax kasta oo ka mid ah ka qaybgalka xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyadoo loo marayo isticmaalka labaad. Si kastaba ha ahaatee, waxaan doortay inaan ka doodo, si kastaba ha ahaatee, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay kaa caawin doonto inaad fahamto sida dadka qaarkood ay uga falceliyaan shaqadaada. Aynu ku soo noqnoqonno mashruuca dhadhanka, isku xirnaanta, iyo waqtiga, tusaale ahaan. Iyadoo si wadajir ah ay isu-geynayaan macluumaadka dhamaystiran iyo xogta laga helay Facebook, xogta dhamaystiran iyo xogta Harvard, cilmi-baarayaashu waxay abuurtay aragti hodan ah oo ku saabsan nolosha bulshada iyo dhaqanka ardayda (Lewis et al. 2008) . Cilmi baarayaal badan oo bulsheed, waxay u muuqataa sida xogta macaamiisha, oo loo isticmaali karo wanaag. Laakiin kuwa kale, waxay u egtahay bilowga diiwaanka burbur, taas oo loo adeegsan karo si aan caddaalad ahayn. Dhab ahaantii, waxay u egtahay waxoogaa labadaba.
Marka laga soo tago kormeerka ballaaran, cilmi-baarayaal-mar kale oo lala kaashado shirkadaha iyo dawladaha-waxay sii kordhin karaan nolosha dadka si ay u abuuraan tijaabooyin la xakameeyey. Tusaale ahaan, Falanqaynta Dareenka, cilmi-baarayaasha waxay ku qoreen 700,000 qof oo tijaabo ah iyagoo aan ogolaansho ama wacyigelin. Sida aan ku sharraxay cutubka 4, noocan ah qarsoodi qarsoodi ah ee kaqeybgalayaasha tijaabo ah ma aha wax aan caadi ahayn, mana u baahna iskaashiga shirkadaha waaweyn. Dhab ahaan, cutubka 4, waxaan ku baray sida loo sameeyo.
Marka la eego awooddan korodhka ah, cilmi-baarayaashu waxay u hoggaansamaan xeerarka aan sharciga waafaqsaneyn, sharciyada, iyo xeerarka . Mid ka mid ah isha iswaafaq la'aanta ayaa ah in awoodaha da'da dijitaalka ay si dhakhso ah uga bedelaan xeerarka, sharciyada, iyo caadooyinka. Tusaale ahaan, Sharciga Guud (qawaaniinta xeerarka xukumaya badi cilmi-baaris dowladeed ee Maraykanka) ma uusan bedelin tan iyo 1981. Ilaha labaad ee khilaafka ayaa ah in caadooyinka ku hareereysan fikrado aan la taaban karin sida qarsoodi ahaan wali ay si firfircoon uga doodaan cilmi-baarayaasha , siyaasad dejiyeyaasha, iyo dhaqdhaqaaqayaasha. Haddii takhasusyahanada goobahaas aan la gaari karin iskudubarka labadaba, waa in aynaan filayn in cilmi-baarayaasha culimadu ama ka-qaybgalayaashu sidaas sameeyaan. Ilaha saddexaad iyo kan ugu dambeeya ee khilaafka ayaa ah in cilmi-baarista digital-ka ah ay sii kordhinayso mowduucyada kale, taas oo horseedaysa caadooyinka iyo xeerarka khatarta leh. Tusaale ahaan, Fikradaha Dareenka wuxuu ahaa iskaashi ka dhexeeya aqoonyahan cilmi ah ee Facebook iyo professor iyo arday ka qalin jabiyay Cornell. Waqtigaas, waxay caadi u ahayd Facebook inay tijaabiso tijaabooyin badan oo aan la socon kormeerka saddexaad, ilaa iyo intii tijaabooyinka ay raaceen shuruudaha Facebook. Marka loo eego Cornell, caadooyinka iyo xeerarku way ka duwan yihiin; inta badan dhammaan tijaabooyinka waa in dib loo eego by Cornell IRB. Sidaa darteed, qaanuunkee sharciga ah waa inuu xukumaa nacaybka shucuurta-Facebook ama Cornell? Marka ay jiraan shuruuc aan is khilaafsaneyn oo shuruud ah, shuruucda, iyo qawaaniinta xittaa macnayaasha macnaha leh waxay dhib ku noqon karaan inay sameeyaan wax sax ah. Dhab ahaan, sababtoo ah khilaafka, waxaa laga yaabaa inaan xitaa ahayn mid sax ah.
Guud ahaan, labadan awood oo kor u kaca awoodda iyo heshiis la'aanta ku saabsan sida awooddaas loo isticmaali karo - macnaheedu waa in cilmi-baarayaasha ku shaqeeya da'da digital ay la kulmaan caqabado anshaxeed mustaqbalka la filayo. Nasiib wanaag, markaad wax ka qabato caqabadahaas, muhiim maahan inaad ka bilowdo xoqdo. Taa baddalkeeda, cilmi-baarayaashu waxay ka soo qaadan karaan xigmaddooda mabaadii'da qaanuuneed ee hore loo sameeyey iyo qaab-dhismeedyada, mawduucyada labada qaybood ee soo socda.